Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seranam-piaramanidina Lufthansa Group: mpandeha 14 tapitrisa amin'ny volana septambra 2019
Tamin'ny volana septambra 2019, ny Vondrona Lufthansa mpandeha an'habakabaka no nandray ny mpandeha manodidina ny 14 tapitrisa. Mampiseho fitomboana 2.3 isan-jato izany raha ampitahaina amin'ny volana lasa teo. Ny kilometatra azo ametrahana kilometatra dia niakatra 2.2 isan-jato raha oharina tamin'ny taon-dasa, tamin'izany fotoana izany dia nitombo 2.4 isan-jato ny varotra. Izany dia miteraka fisondrotana seza 84.7 isan-jato, 0.1 isanjato isan-jato ambony noho ny tamin'ny volana lasa tamin'ny taon-dasa.
Raha atotaly, ny kaompaniam-pitaterana an'ny Vondrona Lufthansa dia nitondra mpandalo eo amin'ny 111.6 tapitrisa tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2019 - firaketana vaovao ho an'ity vanim-potoana ity. Ny haben'ny fipetrahan'ny seza 82.8 isan-jato dia manamarika isa tsy mbola nisy toa azy ihany koa ho an'ny quar¬ters telo voalohany amin'ny taona.
Ny fahaizan'ny entana dia nitombo 4.1 isan-jato isan-taona raha toa kosa ny vidin'ny entana dia nihena 3.6 isan-jato tamin'ny fe-potoana taonina-kilometatra. Vokatr'izany dia nampiseho fihenam-bidy mifanaraka amin'izany ny singa enta-mavesatra entana, nihena 4.7 isan-jato isan-jato hatramin'ny 59.3 isan-jato.
Network Airlines mitondra mpandeha maherin'ny 10.1 tapitrisa
Ny Network Airlines dia ao anatin'izany Lufthansa German Airlines, SWISS ary Austrian Airlines nitondra mpandeha manodidina ny 10.1 tapitrisa tamin'ny volana septambra - 3.0 isan-jato mahery noho ny tamin'ny taona lasa. Raha ampitahaina tamin'ny tamin'ny taon-dasa dia nitombo 3.8 isan-jato ny kilaometatra azo tamin'ny septambra. Ny habetsaky ny varotra dia niakatra 4.0 isan-jato nandritra ny fe-potoana iray ihany. Ny habetsahan'ny enta-mavesatra dia nitombo tamin'ny isa 0.1 isan-jato ka hatramin'ny 84.5 isan-jato raha oharina tamin'ny taona lasa.
Raha fintinina dia nitondra mpandeha manodidina ny 81.9 tapitrisa ny Network Airlines tao amin'ny telovolana telo voalohany tamin'ny taona 2019, 3.8 isan-jato mahery noho ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa.
Zurich hub indray miaraka amin'ny fitomboan'ny mpandeha matanjaka indrindra
Tamin'ny volana septambra, ny fitomboan'ny mpandeha matanjaka indrindra amin'ireo kaompaniam-pifandraisana dia voarakitra ao amin'ny hub Zurich miaraka amin'ny 6.8 isan-jato. Ny isan'ny mpandeha dia nitombo 4.3 isan-jato tany Wina ary 1.7 isan-jato tao Munich. Tany Frankfurt, ny isan'ny mpandeha nandritra io vanim-potoana io dia niova tsy niova tamin'ny ambaratonga lasa teo. Ny tolotra ifotony koa dia nitombo tamin'ny ambaratonga samihafa: tany Munich tamin'ny 11.8 isan-jato, tany Zurich tamin'ny 3.2 isan-jato, tany Viena tamin'ny 1.0 isan-jato ary tany Frankfurt 0.8 isan-jato.
Lufthansa German Airlines dia nitatitra mpandeha manodidina ny 6.7 tapitrisa tao Septem¬ber, fitomboana 1.7 isan-jato raha oharina tamin'io volana io tamin'ny taon-dasa. Ny fiakarana 4.4 isan-jato amin'ny kilometatra seza amin'ny volana septambra dia mifanaraka amin'ny fampitomboana 4.6 isan-jato ny varotra. Ankoatr'izay, ny haben'ny seza dia 84.2 isan-jato 0.2 isan-jato teboka avo kokoa noho ny tamin'ny volana lasa tamin'ny taon-dasa. Raha atotaly dia nandray mpandeha 54.6 tapitrisa tao anaty sambo i Lufthansa tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny 2019, 2.8 isan-jato mahery noho ny herintaona talohan'izay. Ny fampitomboana 4.1 isan-jato ny fahaiza-manao amin'ny telovolana telo voalohany dia nahemotra tamin'ny fampitomboana 5.1 isan-jato ny vokatra, ka nahatonga ny fatran'ny seza 82.6 isan-jato (+ 0.8 isan-jato isan-jato).
Ny Eurowings dia mampitombo ny fampiasana ny fahaizany hatramin'ny 85.6 isan-jato
Eurowings (anisan'izany ny Brussels Airlines) dia nitondra mpandeha manodidina ny 3.8 tapitrisa tamin'ny volana septambra - manodidina ny 3.6 tapitrisa tamin'ny sidina lavitra ary 264,000 tamin'ny sidina lavitra. Izany dia mitombo 0.3 isan-jato raha oharina amin'ny tamin'ny taona lasa. Ny fahafahan'ny volana septambra dia 4.3 isan-jato ambanin'ny haavon'ny taona teo aloha, raha toa ka nihena 4.0 isan-jato ny habetsaky ny varotra, vokatr'izany dia nitombo 0.3 isan-jato ny isa hatramin'ny 85.6%.
Tamin'ny serivisy fitaterana entana fohy dia nidina 0.4 isan-jato ny fahaiza-manao ary 0.6 isan-jato ny isan'ny varotra. Izany dia nahatonga ny isa 0.2 isan-jato nihena ny isan'ny fipetrahan'ny seza 86.6 isan-jato raha oharina tamin'ny volana septambra 2018. Ny haben'ny seza ho an'ny serivisy lavitra dia nitombo 1.1 isan-jato isan-jato hatramin'ny 83.2 isan-jato nandritra ny vanim-potoana mitovy, taorian'ny fihenan'ny 12.7 isan-jaton'ny fahaiza-manao ary fihenan'ny 11.5 isan-jato amin'ny habetsaky ny varotra, raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa.
Raha atotaly, ny Eurowings (anisany ny Brussels Airlines) dia nandray ny mpandeha manodidina ny 29.7 tapitrisa tao anatin'ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2019 - 1.4 isan-jato mahery noho ny tamin'ny vanim-potoana nitovy tamin'ny taon-dasa. Ny haben'ny seza dia nitombo 0.6 isan-jato isan-jato hatramin'ny 82.8 isan-jato tamin'ny telovolana telo voalohany. Nandritra io vanim-potoana io dia nitombo 0.9 isan-jato ary 1.7 isan-jato ny varotra.